प्राप्त अधिकारको प्रयोग उत्पीडित वर्गका महिलाले गर्न पाउनुपर्छ – Janaubhar
प्राप्त अधिकारको प्रयोग उत्पीडित वर्गका महिलाले गर्न पाउनुपर्छ
नारायणी शर्मा ‘प्रतीक्षा’
पोलिटव्यूरो सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्र
नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य नारायणी शर्मा ‘प्रतीक्षा’ विभिन्न जनसंघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उत्पीडित वर्गका महिलाहरुले प्रयोग गर्न नपाएको बताउनुहुन्छ । महिला मुक्तिका लागि संघर्ष गर्ने महिलाहरुले अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा केन्द्रित भएर नौलो जनउभार साप्ताहिकका सह–सम्पादक पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानी । –सम्पादक
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई हामीले भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेका छौं । अहिले महिला संगठनको अगुवाईमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम गर्दै छौं । त्यसैगरी विभिन्न सरोरकारवालाहरुसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको महत्व के छ ?
नेपाली महिला मुक्ति आन्दोलनमा यो निकै अभूतपूर्व उपलब्धि हो । तत्कालीन समयमा श्रमिक महिलाहरुले आफ्नो अधिकारका लागि गरेको ठूलो संघर्ष थियो । यो संगठित विद्रोहले तत्कालीन शासकहरु झुक्न बाध्य भएका थिए । महिलाहरुले विद्रोहबाट आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सफल भए । अमेरिकामा भएको उक्त घटनाले संसारभर नै नयाँ सन्देश दिएको थियो ।
माओवादीले सञ्चालन गरेको वर्गसंघर्षमा लाखौं महिलाहरुले सहभागिता जनाएका थिए । १० वर्षे जनयुद्धबाट नेपाली महिलाहरुले के प्राप्त गरे ?
महिला मुक्तिको सवालमा नेपाली जनयुद्धको ठूलो भूमिका छ । जनयुद्ध हुँदै जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा महिलाहरुले ठूलो संघर्ष गरेका छन् । नेपालमा वर्गीय उत्पीडन छ । त्यो उत्पीडनभित्र महिला एक्लैले संघर्ष गरेर अधिकार प्राप्त हुने अवस्था थिएन । महिला मुक्तिका लागि वर्गीय मुक्ति अनिवार्य थियो । वर्गीय मुक्तिमै महिला मुक्ति सम्भव हुन्छ भन्ने मूल उद्देश्यसहित अधिकार प्राप्तिको निम्ति हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा लाग्यौं ।
अहिले पनि महिलाहरु संघर्षमा छन् । त्यो मुक्ति प्राप्तीका लागि महिलाहरु कुनै पनि संघर्षमा पछाडि हटेका छैनन् । अहिले त्यही संघर्षको फलस्वरुप धेरै अधिकार प्राप्त भएको छ । राज्यका विभिन्न अंगमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि १० वर्षे जनयुद्धको निकै ठूलो भूमिका रहेको छ । जनयुद्धले महिलाहरुलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा बोल्न सिकाएको छ । संघर्ष गर्न सिकाएको छ । अहिले जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै बलमा बनेको संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको छ । नयाँ संविधानमा महिला अधिकारका धेरै कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमा उल्लेख भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि कानूनहरु बनाउनुपर्ने छ । हामीले विभिन्न कानूनहरु बनाउँदा महिला अधिकारलाई ध्यान दिनुपर्छ । संविधानमा प्राप्त उपलब्धिलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाली महिलाहरुको अवस्था कस्तो छ ?
संसारका सबै महिलाहरुको अवस्था एउटै तराजुमा नाप्न सकिदैन । विकसित मुलुकको तुलनामा हाम्रो जस्ता विकाशोन्मुख राष्ट्रहरुमा महिलाका समस्या धेरै छन् । नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरुले केही हदसम्म अधिकार प्राप्त गरेका छन् । तर, त्यसको व्यावहारिक प्रयोग कसरी हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । महिला भएकै कारणले धेरै अवसरहरुबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ महिलालाई ।
नेपालको सन्दर्भमा मूलभूत रुपमा सामन्तवाद अन्त्य भएको छ । तर, सामन्तवादका अवशेषहरु अझैं पनि बाँकी छन् । नेपाली राजनीतिक चेतना स्तर निकै बढेको छ । यो चेतना स्तरले महिलाहरुलाई पनि अधिकार प्राप्तिका लागि थप सशक्त बनाएको छ । अहिले महिलाहरु सचेत भएर संघर्षमा हाम फालेका छन् ।
वर्गीय रुपमा महिलाहरुका समस्या फरक छन् । वर्तमान अवस्थामा नेपाली श्रमिक महिलाहरुको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
नेपालको सन्दर्भमा श्रमिक महिलाहरुको अवस्था दयनीय नै छ । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । नेपालमा अधिकांश मजदूर महिलाहरु कृषिमा आधारित हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म पनि कृषिलाई औपचारिक श्रमको रुपमा गणना हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुको कामलाई अनौपचारिक श्रमको रुपमा मान्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि पुरुषसरह समान पारिश्रमिक पाउने अवस्था छैन ।
औद्योगिक विकास भएका क्षेत्रहरुमा पनि मजदूर महिलाको संख्या निकै कम छ । नेपालमा काम गर्ने मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत श्रम गर्न जाने महिलाहरु जोडेर हामीले गर्नुपर्छ । नेपाली बजारमा महिलाहरुको अधिकारको बारेमा कानुनी रुपमा त्यति व्यवस्थित भएको छैन । खाडी लगायतका मुलुकमा जाने नेपाली महिलाहरुको अवस्था पनि राम्रो छैन । धेरै महिलाहरु घरेलु हिंसाको शिकार भएका छन् ।
तपाईहरु वर्गीय मुक्तिका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुभयो । उत्पीडित वर्गका महिलाहरुको संघर्षबाटै धेरै अधिकार संविधानमै सुनिश्चित भएका छन् । तर, ती अधिकारहरुको सभ्रान्त वर्गका महिलाहरुले मात्र उपभोग गर्न पाएको देखिन्छ । ती श्रमिक महिलाहरुलाई प्राप्त अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण किन नबनेको होला ?
तपाईले अत्यन्त राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो । यही कुरामा हाम्रो ध्यान बढी केन्द्रीत भएको छ । अधिकार पाउनका लागि संघर्ष उत्पीडित वर्गका महिलाहरु, आधारभूत वर्गका, दलित, मधेशी तथा जनजाति र श्रमजिवी महिलाहरुले गरे तर, प्राप्त उपलब्धिको प्रयोग सभ्रान्त वर्गका महिलाहरुले मात्र गर्न पाएको देखिन्छ । उनीहरु हिजो पनि राज्यसत्ताको वरिपरि थिए । उनीहरुले नै महिलाको नाममा अधिकार प्रयोग गरिरहेका थिए । अहिले पनि प्राप्त उपलब्धिको पहिलो हिस्सेदार उनीहरु नै बनेको देखिन्छ ।
हाम्रो वर्गका महिलाहरु अहिले यो या त्यो नाममा पछाडि पर्ने र चुलो चौकोमा सीमित हुने अवस्था आएको छ । हामीले हिजो क्रान्ति गर्दा कुनै पनि क्रान्तिको सफलता वा असफलता महिला सहभागिताले नै सुनिश्चितता गर्छ भनेका थियौं । ५१ प्रतिशत रहेका महिलाहरुलाई सहभागी नगराएर कुनै पनि आन्दोलनले सफलता हासिल गर्न सक्दैन भनेर कुरा उठाइएको थियो ।
आज त्यसरी नै ५१ प्रतिशत महिलाहरुले नै त्यो अधिकार उपभोग गर्ने अवस्था नआउँदासम्म संविधान र कानुनमा उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । हिजो अधिकारका लागि घर परिवार, चुलो चौको र बालबच्चा घरमै छोडेर मुक्तिका लागि संघर्षमा आएका महिलाहरुले अधिकारको उपभोग गर्न नपाउँदासम्म अहिले प्राप्त भएका अधिकारको कुनै अर्थ छैन भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।
अब कार्यान्वयनका लागि पनि हामी उत्पीडित महिलाहरु नै उठ्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । आधारभूत वर्गका महिलाहरु अब प्राप्त उपलब्धि आफूले उपभोग गर्नका लागि पनि संघर्ष गर्न जरुरी छ । हामीले यसका लागि आधारभुत वर्गका महिलाहरुलाई संगठित गर्ने र प्रशिक्षित गर्ने काम गरिरहेका छौं । अब प्राप्त उपलब्धिहरुलाई पनि सभ्रान्त वर्गका महिलाहरुबाट खोसेर उत्पीडित महिलाहरुको हात लिनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लागिरहेका छौं ।
अब वास्तविक रुपमा उत्पीडित वर्गका महिलाहरुको अधिकारका लागि तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
तपाईले उठाउनु भएको कुरा गम्भीर छ । नेपाली समाजमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु धेरै अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरुले महिला भएकै कारणले धेरै अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ । तर, उत्पीडित वर्गका महिलाहरु झन् बढी समस्यामा परेका छन् ।
हामीले संविधानमा दलित महिला, जनजाति महिला, पछाडि पारिएका महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर कुरा उठायौं । त्यस अनुसार संविधानमा अधिकार पनि उल्लेख भयो । अब त्यो अधिकार वास्तविक उत्पीडित वर्गका महिलाले पाउने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौं ।
हिजो जसले संघर्ष गरे, जसले बलिदान गरे, जो आर्थिक अवस्थामा निकै पछाडि पारिएका छन्, उनीहरुको अधिकार प्राप्तीका लागि हामीले थप संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
Prevअन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस र मुक्ति
Nextश्रीदेवी वाथटवमा डुबेरै मरेकी हुन् त ?